40 Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 2 “Pazuva romwedzi wokutanga,+ pazuva rokutanga romwedzi wacho, umise tebhenekeri yetende rokusanganira.+ 3 Uise areka yechipupuriro+ mukati mayo wovharidzira Areka neketeni.+ 4 Upinze tafura+ worongedza zvinofanira kuva pamusoro payo, uye upinze chigadziko chemarambi+ wobatidza marambi acho.+ 5 Uise atari yendarama yerusenzi+ pamberi peareka yechipupuriro, woisa chinhu chinovhara pasuo retebhenekeri panzvimbo yacho.+ 6 “Unofanira kuisa atari+ yechinopiwa chinopiswa pamberi pesuo retebhenekeri yetende rokusanganira, 7 uye uise bheseni pakati petende rokusanganira neatari, uye uise mvura mukati maro.+ 8 Ugadzire chivanze+ kumativi ose woisa chinhu chinovhara pagedhi+ rechivanze. 9 Utore mafuta okuzodza nawo+ wozodza tebhenekeri nezvose zviri mukati mayo,+ uinatse iyo nemidziyo yayo yose, kuti ive chinhu chitsvene. 10 Uzodze atari yechinopiwa chinopiswa nemidziyo yayo yose uye unatse atari,+ kuti ive atari tsvenetsvene.+ 11 Uzodze bheseni nechigadziko charo worinatsa. 12 “Unofanira kubva wauya naAroni nevanakomana vake pedyo nesuo retende rokusanganira wovageza nemvura.+ 13 Upfekedze Aroni nguo tsvene+ womuzodza,+ womutsvenesa, kuti ave mupristi wangu. 14 Pashure paizvozvo, uuye nevanakomana vake pedyo, wovapfekedza nguo refu.+ 15 Uvazodze sokuzodza kwaunenge waita baba vavo,+ kuti vave vapristi vangu, uye kuzodzwa kwavo kucharamba kuchivapa simba roupristi nokusingagumi muzvizvarwa zvavo zvose.”+ 16 Mosesi akaita maererano nezvose zvaakanga arayirwa naJehovha.+ Akaita izvozvo chaizvo. 17 Naizvozvo mumwedzi wokutanga, mugore rechipiri, pazuva rokutanga romwedzi wacho, tebhenekeri yakamiswa.+ 18 Mosesi paakamisa tebhenekeri yacho, akaisa zvigadziko+ zvayo pasi, akaisa mapuranga ayo emadziro+ nembariro dzayo,+ akamisa mbiru dzayo.+ 19 Akabva awaridza tende+ pamusoro petebhenekeri, akaisa chokufukidzisa+ chetende pamusoro payo, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 20 Pashure paizvozvo akatora Chipupuriro+ akachiisa muAreka,+ akaisa matanda+ paAreka, akaisa chifukidziro+ pamusoro peAreka.+ 21 Akabva apinza Areka mutebhenekeri, akaisa keteni+ rechinhu chinovhara panzvimbo yaro, akavharidzira areka yechipupuriro,+ sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 22 Akaisawo tafura+ mutende rokusanganira kurutivi rwetebhenekeri nechokuchamhembe, kunze kweketeni, 23 akaronga mutsara wechingwa+ pamusoro payo pamberi paJehovha, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 24 Akabva aisa chigadziko chemarambi+ mutende rokusanganira pamberi petafura, kurutivi rwetebhenekeri nechokumaodzanyemba. 25 Akabva abatidza marambi+ acho pamberi paJehovha, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 26 Akaisawo atari+ yendarama mutende rokusanganira pamberi peketeni, 27 kuti apfungaidzire rusenzi pairi,+ sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 28 Akazopedzisira nokuisa chinhu chinovhara+ pasuo retebhenekeri munzvimbo yacho. 29 Akaisa atari+ yechinopiwa chinopiswa pasuo retebhenekeri yetende rokusanganira, kuti apisire chinopiwa chinopiswa+ nechinopiwa chezviyo pairi, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 30 Akabva aisa bheseni pakati petende rokusanganira neatari, akaisa mvura yokugeza mariri.+ 31 Mosesi naAroni nevanakomana vake vakagezera maoko avo netsoka dzavo mariri. 32 Pavaipinda mutende rokusanganira nepavaiswedera pedyo neatari, vaigeza,+ sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 33 Akazomisa jira rechivanze+ kupoterera tebhenekeri neatari, akaisa chinhu chinovhara pagedhi rechivanze.+ Naizvozvo Mosesi akapedza basa racho. 34 Zvino gore+ rakafukidza tende rokusanganira, kubwinya kwaJehovha kukazadza tebhenekeri. 35 Mosesi haana kukwanisa kupinda mutende rokusanganira, nokuti gore+ racho rakagara pamusoro payo uye kubwinya kwaJehovha kwakazadza tebhenekeri.+ 36 Zvino paisimuka gore richibva pamusoro petebhenekeri, vanakomana vaIsraeri vaiputsa musasa muzvikamu zvose zvorwendo rwacho.+ 37 Asi kana gore risina kusimuka, vaisaputsa musasa kusvikira zuva raraisimuka.+ 38 Nokuti gore raJehovha rakanga riri pamusoro petebhenekeri masikati, uye moto wairamba uri pamusoro payo usiku pamberi peimba yose yaIsraeri muzvikamu zvavo zvose zvorwendo rwacho.+